Bunions (ဗျူနီယံ) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Bunions (ဗျူနီယံ)
Bunions (ဗျူနီယံ) ကဘာလဲ။
တကယ်တော့ ခြေမရိုးအရင်းကနေ အရိုးအတက်ထွက်ခြင်းပါ။ ခြေမနဲ့ဘေးကခြေချောင်းတွေကိုအတင်းဖိတွန်းထားမိတဲ့အခါမျိုးမှာ ခြေမဆစ်ကြီးလာပြီး ဘေးကိုထိုးထွက်လာခြင်းဖြစ်တယ်။ ထိုအရိုးအတက်အပေါ်က အရေပြားကတော့ နီရဲရောင်ရမ်းနေတတ်ပါတယ်။
Bunions (ဗျူနီယံ) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
ခြေမရိုးအတက်ထွက်ခြင်းဟာ အလွန်အဖြစ်များပြီး လူတိုင်းမှာဖြစ်နိုင်တယ်။ အမျိုးသမီးတွေမှာပိုဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေစီးလေ့ရှိတဲ့ ဖိနပ်အမျိုးအစားကြောင့်ဖြစ်တယ်။ အသေးစိတ်အတွက် ဆရာဝန်နဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ကြည့်ပါ။
Bunions (ဗျူနီယံ) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
ဆက်တိုက် သို့ အချိန်ခြားပြီး နာကျင်ခြင်း။
တခြားလက္ခဏာတွေလည်းရှိနိုင်တာကြောင့် စိုးရိမ်သည်များရှိပါက ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ကြည့်ပါ။
ခြေမ သို့ ခြေထောက်လှုပ်ရှားရခက်လာခြင်း
ခြေမဆစ်အတက်ကြောင့် အဆင်ပြေသော ရှူးဖိနပ်ရှာရခက်ခြင်း။
ဖွင့်ဆိုမှုတွေတော့အမျိုးမျိုးရှိကြပေမယ့် အကြောင်းအရင်းအတိအကျကတော့ မသိရသေးပါဘူး။ ဖြစ်နိုင်ချေရှိတာတွေကတော့-
ကျဉ်းကြပ်တဲ့ ထောက်မြင့်ဖိနပ်တွေက ခြေမရိုးဆစ်အတက်ထွက်စေတယ် သို့ ခြေမရိုးဆစ်အတက်ထွက်ခြင်းက ဖိနပ်တွေနဲ့ဆိုင်နေတယ်ဆိုတာကို ကျွမ်းကျင်သူတွေက သဘောမတူထားပါဘူး။
နှလုံးလေးဘက်နာအဆစ်ရောင်ခြင်းကဲ့သို့ တချို့သောအရိုးအဆစ်ရောင်ခြင်းတွေနဲ့တော့ သက်ဆိုင်ကောင်း သက်ဆိုင်နေနိုင်ပါတယ်။
Bunions (ဗျူနီယံ) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
Bunions (ဗျူနီယံ) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
ထောက်မြင့်ဖိနပ်တွေ – ထောက်မြင့်ဖိနပ်တွေဟာ ခြေဖဝါးတစ်ခုလုံး အလေးချိန်ကို ခြေချောင်းတွေပေါ်သက်ရောက်စေပါတယ်။
ကောင်းကောင်းမတော်သောရှူးများ – ကျပ်လွန်း၊ ကျဉ်းလွန်း ၊ ချွန်လွန်းသော ရှူးများကိုစီးခြင်းဟာ ခြေမအရိုးဆစ်အတက်ထွက်စေတယ်။
နှလုံးလေးဘက်နာကြောင့်အဆစ်ရောင်ခြင်း – ထိုရောင်ရမ်းတတ်သော ရောဂါအခြေအနေတစ်ခုရှိခြင်းဟာ အရိုးအတက်ထွက်ခြင်းပိုဖြစ်နိုင်စေတယ်။
မျိုးရိုးလိုက်ခြင်း – မျိုးရိုးလိုက်တတ်တဲ့ ခြေထောက်ပုံစံမမှန်ခြင်းကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Bunions (ဗျူနီယံ) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ဖော်ပြပါအချက်အလက်တွေဟာ ကျန်းမာရေးအကြံဉာဏ်တွေရဲ့ အစားထိုးမဟုတ်တာကြောင့် အမြဲဆရာဝန်နဲ့သေချာတိုင်ပင်ဖို့ မမေ့ပါနဲ့။
ဆရာဝန်က ခြေထောက်ကိုစမ်းသပ်ခြင်းဖြင့် အရိုးအတက်ထွက်ခြင်းကို သိရှိနိုင်ပါတယ်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စမ်းသပ်မှုအပြီးမှာ အတက်ထွက်ရခြင်းအကြောင်းအရင်းနဲ့ ပြင်းထန်မှုကိုသိဖို့ ဓါတ်မှန်ရိုက်ပါလိမ့်မယ်။
Bunions (ဗျူနီယံ) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
ကုသမှုက ရောဂါပြင်းထန်မှုနဲ့ ခံစားနေရတဲ့နာကျင်မှုတို့ပေါ် မူတည်နိုင်တယ်။
ခွဲစိတ်မှုမလိုဘဲ ခြေမရိုးအတက်ထွက်ခြင်းရဲ့ နာကျင်မှုနဲ့ ဖိအားကိုသက်သာစေတဲ့နည်းတွေကတော့-
ဖိနပ်ပြောင်းစီးခြင်း – ခြေချောင်းလေးတွေအတွက် နေရာကျယ်ကျယ်ရှိပြီး သက်တောင့်သက်သာဖြစ်တဲ့ ဖိနပ်မျိုးစီးပါ။
ပတ်တီးစည်းခြင်း – ဆေးဆိုင်တွေမှာ အလွယ်တကူဝယ်လို့ရတဲ့ ခြေမရိုးအတက်ထွက်ခြင်းအတွက် သုံးရသောဆေးမပါ ပတ်တီးတွေကိုသုံးနိုင်ပါတယ်။ ဆရာဝန်ကခြေထောက်ပုံမှန်အနေအထားအနေနဲ့ စည်းနိုင်အောင် ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာ Bunion ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဖိအားနဲ့ နာကျင်မှုကိုသက်သာစေပါလိမ့်မယ်။
ဆေးကုသမှု – Acetaminophen (Tylenol, others), ibuprofen (Advil, Motrin IB, others) naproxen sodium (Aleve) စသည်တို့က နာကျင်မှုကိုသက်သာစေပါတယ်။ Cortisone ထိုးခြင်းကလည်း အထောက်အကူဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ရှူးအတွင်းထည့်သုံးသည့်အခံ – ရှူးဖိနပ်စီးထဲအခါ အတွင်းကနေ အခံထည့်ခံစီးခြင်းဟာ ခြေထောက်လှုပ်ရှားတဲ့အခါ ဖိအားညီညီမျှမျှပျံ့သွားစေပြီး နာကျင်မှုသက်သာစေပါတယ်။ တချို့အတွက် သာမန်ဆေးဆိုင်ကနေ ဝယ်လို့ရပြီး တချို့ကတော့ အရိုးအဆစ်ဆိုင်ရာအထောက်အပံ့ပစ္စည်းလိုကောင်းလိုနိုင်ပါတယ်။
ရေခဲကပ်ခြင်း – ခြေထောက်အသုံးပြုတာများသွားတဲ့အခါ သို့ ရောင်ရမ်းနေတဲ့အခါ ခြေမရိုးအတက်ပေါ် ရေခဲကပ်ခြင်းက ရောင်ရမ်းခြင်းကိုသက်သာစေပါတယ်။
ခွဲစိတ်ခြင်း – တခြားနည်းလမ်းတွေနဲ့ လက္ခဏာတွေ မသက်သာတော့တဲ့အခါ ခွဲစိတ်ဖို့လိုလာပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် bunion ကိုမကြာခဏနာကျင်စေတာ သို့ နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုတွေကို အနှောင့်အယှက်ပေးနေတာ မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ ခွဲစိတ်ခြင်းကို အားမပေးပါဘူး။
ခွဲစိတ်နည်းမျိုးစုံးရှိတာကြောင့် ပြဿနာအားလုံးအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်နေတဲ့ နည်းရယ်လို့တော့ ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။
ခြေမတဝိုက်ရှိ ရောင်ရမ်းနေသော တစ်သျှူးများကိုဖယ်ပစ်ခြင်း။
ထွက်နေသော အရိုးအတက်ကို ဖယ်ပစ်ခြင်းဖြင့် ခြေမကိုပြန်ဖြောင့်မတ်စေခြင်း။
ခြေမနဲ့ ခြေဖဝါး ကြားမှာရှိတဲ့ အရိုးရှည်ကိုပြန်ညှိပေးခြင်းဖြင့် ပုံစံမကျသောခြေမဆစ်ကို ပြန်တည့်စေခြင်း။
ထိခိုက်စေသောအဆစ်မှ အရိုးများကို ပုံသေဆက်သွယ်လိုက်ခြင်း။
ခွဲစိတ်ပြီးတဲ့အခါ ချက်ခြင်းလမ်းပြန်လျှောက်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကောင်းကောင်းပျောက်ဖို့ကတော့ ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်မှ လအနည်းငယ်ထိကြာနိုင်ပါတယ်။
ပြန်မဖြစ်စေဖို့အတွက် သင့်လျော်တဲ့စီးတဲ့ရှူးဖိနပ်ကိုသာ စီးဖို့မမေ့ပါနဲ့။ လူအများစုအတွက် ခွဲစိတ်ပြီးတဲ့အခါမှ ကျပ်တည်းတဲ့ ရှူးဖိနပ်ထပ်စီးဖို့ မျှော်လင့်နေခြင်းကမသင့်လျော်ပါဘူး။
ခွဲစိတ်မှုကနေ ဘာတွေမျှော်လင့်သလဲဆိုတာ ဆရာဝန်နဲ့သေချာဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပါ။
ရှူးဖိနပ်တွေကိုသေချာရွေးပါ။ ဖိနပ်ထိပ်ကောင်းကောင်းကျယ်ပြီး ခြေချောင်းတွေနေရာချောင်ချောင်ချိချိရမယ့် ဖိနပ်မျိုးရွေးသင့်တယ်။
သင့်ရှူးဖိနပ်တွေက ခြေထောက်ကိုဖိကြပ်ထားခြင်းမရှိဘဲ ခြေထောက်ပုံစံကောင်းကောင်းဆန့်သင့်ပါတယ်။
http://www.webmd.com/skin-problems-and-treatments/understanding-bunions-treatment#2. Accessed July 4, 2017.
http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/bunions/home/ovc-20262028. Accessed July 4, 2017.
http://www.nhs.uk/conditions/Bunion/Pages/Introduction.aspx. Accessed July 4, 2017.
Bunions Can Occur at Any Age.
http://www.webmd.com/skin-problems-and-treatments/news/20010208/bunions-can-occur-at-any-age#1. Accessed July 4, 2017.
ဝမ်းဗိုက်လေပွခြင်းကို ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းအရင်းများ